Ukuthuthwa okuzenzakalelayo kusuka eChina, Ukulethwa komoya kusuka eChina - SUYI
Ukulethwa kwezimpahla ezivela eChina
Ukulethwa kwezimpahla ezisuka eChina ziye eRussia, eKazakhstan, e-Ukraine, eBelarus Sizibandakanya kwezokuthutha izinhlobo ezahlukene eziya emazweni e-CIS.Noma ngabe ukuphi, sicela uxhumane nathi! Sizohambisa ngokushesha izimpahla ezivela eChina
Ukulethwa okuvezwa okuvela eChina ngezinsuku eziyi-1-3 kuyindlela esheshayo yokuthola izimpahla ezivela eChina. Ukulethwa komoya kusetshenziselwa ukuhambisa amasampuli, izimpahla ezibiza kakhulu futhi kaningi ngezingxenye zokuphepha zemishini eyahlukahlukene.
Ukulethwa komoya kusuka eChina kuyadingeka ukuhanjiswa okusheshayo kwempahla kuya eRussia. Sithumela izimpahla zisuka eMoscow ngosuku lokufika sisebenzisa izinkampani zezokuthutha zaseRussia.Ungathola izindleko zokulethwa ngokusithumela isicelo.
indlela ejwayelekile futhi efakazelwe yokuletha izimpahla ezivela eChina ziye eRussia. Ubuhle bokuthuthwa kweCargo ukuthi kuyindlela elula futhi esheshayo yokuletha izimpahla.
Ukulethwa okuvela eChina ngesitimela kungenye yezinhlobo ezithandwa kakhulu zokuthuthwa kwempahla. Kunezinketho eziningi zezikhombisi-ndlela nezindawo zokuvunyelwa kwamasiko ezimpahla. Ngakho-ke, kungenzeka ukhethe indlela efanelekayo yesicelo seklayenti ngalinye, elizokwanelisa zombili imigomo nezindleko zokulethwa.
Singabantu ISUYI IMPORT AND EXPORT CO., LTD + CARGO517. Siyinkampani ebhaliswe ngokusemthethweni e-PRC, enikezela ngezinsizakalo ezigcwele zezinsiza zokusebenza, ezohwebo nezomnotho.
Abaphathi abaphezulu benkampani banesipiliyoni esicebile, iminyaka eyi-10 bebelokhu bethuthukisa amakhono abo ukuze banikeze izimo nezinsizakalo ezihamba phambili kumakhasimende abo. Ulwazi oluqinisekile lwezilimi eziningana lukuvumela ukuthi usebenze ngempumelelo namakhasimende waseRussia nawaseChina.
UConstruction 0347 UNI-BLOCK AQUAPARK 26 IZINGXENYE
Okuzenzakalelayo Inzwa Gel Polish Elapha Man ...
Dasima Isitolo esidayisa yonke impahla 806 Household IPX7 Manzi ...
Electric Muscle Massager 2500mAh Isixwa ...
2020 fan entsha amanzi Ukupholisa ...
Amakhethini okushawa ngesihlahla sikaKhisimusi, amanzi ...
Umshini wokuthunga wezimboni weJack JK-F4
Uzakwethu waseChina ongathunyelwa kwamanye amazwe, Ukuhamba kwezitimela kusuka eChina, Ukuthengwa okuthe xaxa kwezimpahla ezivela eChina, china umlamuli moscow, Amagajethi asuka e-china, Cargo ngokushesha, sizikhandle, ngokuthembekile kusuka China,